Shiri musango reAmazon | Absolut Kufamba
Shiri muAmazon Rainforest
Daniel | 29/06/2021 11:00 | Yakagadziridzwa ku 29/06/2021 12:00 | Korombiya
Kwemakumi emakore makumi mashanu nyanzvi dzemakomo uye vanoda zvisikwa kubva kumativi ese epasi vakafamba kuenda kuSouth America kunoona hupfumi uye ruvara rwe marudzi mazhinji eshiri musango remvura reAmazon.
Uku hakusi kudzidziswa kwemahara: kutanga sa1970, iyo Swiss-American ornithologist Rodolphe Meyer weSchahauense akataura mubhuku rake "Nhungamiro kune shiri dzeSouth America" ​​(Nhungamiro kune shiri dzeSouth America) kuti pakanga pasina nzvimbo pasi rose ine shiri dzakawanda senge muAmazon.
Uye kunyangwe zvakadaro, kugadzira katarogu yakakwana yeshiri dzese dzinogara muchikamu chino chenyika ibasa rakaoma. Inofungidzirwa kuti mudunhu rese (rinosanganisira zvakawanda zveBrazil, Venezuela, Colombia, Peru nedzimwe nyika), huwandu hwese hunenge hwakatenderedza mhando mazana matatu nemazana matatu. Pakati peizvi, inenge hafu yaizove endemic.
Kuti uwane mhedziso iyi, huwandu hwehuwandu hweshiri musango reAmazon rinotarisirwa nemasangano akasiyana hwatorwa senge hwaro Mimwe yemhando idzi inongowanikwa mune dzimwe nzvimbo dzekugara, nepo dzimwe dzichipararira muAmazon.
Heino muyenzaniso weshiri dzinomiririra zvikuru musango reAmazon:
2 Hummingbirds uye shiri diki
3 Gallinaceae uye mallards
4 Mapuroti uye Macaws
5 Shiri dzinobvambura
Nzvimbo yeAmazon inogara kumarudzi akasiyana siyana evatapi vakasarudzika pasirese. Inonyanya kuzivikanwa ndeye Gondo (Harpia harpyja), iyo parizvino iri kutyisidzirwa nekutsakatika. Zvisinei, inogona kuwanika muColombia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Peru, Suriname, French Guyana, kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweBrazil, uye kuchamhembe kweArgentina.
Nemamita angangoita maviri emapapiro, ndizvo rimwe remakondo makuru pasi rose. Iyo grey, chena uye nhema mapapiro ari, pamwe chete neayo akasarudzika crest, ayo makuru anosarudzika maficha.
Dzimwewo shiri dzinodya nyama dzedunhu rino cryptic hawk (Micrastur mintoriwave yakashamisa zizi (Pulstrix perspicillata).
Hummingbirds uye shiri diki
Boka rakakura kwazvo reshiri musango remvura reAmazon hapana mubvunzo kuti shiri diki, dzinoimba kana kwete. Pakati pavo pane mamwe marudzi anomiririra akadai seayo hummingbird topazi (Topaza pella), ine muswe wayo murefu uye inokurumidza kurova. Iyi shiri yakanaka ine mapapiro ane mavara akajeka uye inoshandisa muromo wayo wakanaka kuyamwa mukume kubva pamaruva. Inoparadzirwa munzvimbo yese.
Kune dzimwe shiri dzakawanda mudiki muAmazon, rakakura bhuku. Kududza imwe yeanonyanya kuzivikanwa, isu tichataura iyo tsvuku nuthatch (Dendrocolaptes picummus), irwo rudzi rwemuti wehuni. Kunyanya kutaurwa kweshiri yepakati, asi yakanyanya kushata uye yakakurumbira shiri: iyo toucan (Ramphastos akabata), inozivikanwa zvikuru nemuromo wayo muhombe.
Gallinaceae uye mallards
Kune dzimwe shiri dzakawanda musango reAmazon dzinotishamisa. Mhando dzemhuri yegallinaceae vane makumbo akasimba, miromo mipfupi, uye kazhinji havakwanise kubhururuka kana kuti vanongokwanisa kufamba nendege pfupi pakakwirira.
Muchikamu chino panomira camungo (Anhima cornuta), shiri-yakaita seshiri inoonekwa zviri nyore nekapundu kadiki kanobudikira pamusoro pemuromo wayo.
Munharaunda ine nzizi dzakawanda, migero nemadhamu seAmazon, zvine musoro kuwana shiri zhinji dzemhuri ye madhadha, kureva, madhadha nezvimwe zvakadaro. Iyo Orinoco hanzi kana the wigeon dhadha Iwo maviri chaiwo chaiwo marudzi, pasina kukanganwa iyo huangana, dhadha remusango rine mavara ane mavara.
Mapuroti uye Macaws
Rudzi urwu rweshiri pasina mubvunzo ndirwo rwekutanga rwunouya mupfungwa kana tichifunga nezvemhuka dzeAmazon. Kune akawanda marudzi emacaws, ehukuru hwakasiyana uye hunhu hwepanyama. Iyo Hyacinth macaw (Anodorhynchus Hyacinthinus), inozivikanwawo seyebhuruu macaw, ingangove inonyanya kufarirwa. Ine mapapiro ane bhuruu ane hupenyu, ane minhenga yegoridhe pachirebvu. Nehurombo, iri mhando ine njodzi iri mungozi.
Imwe mhando inoshamisa kwazvo ndeye green wing macaw (Ara chloroptera), iyo inogona kuwanikwa munzvimbo dzakasiyana mudunhu reAmazon. Mhuka idzi dzinosiyaniswa nesimba remiromo yadzo, njere dzadzo uye nekugara kwenguva refu, sezvo dzichikwanisa kurarama makore makumi matanhatu kana kudarika.
Carrion shiri marudzi, ayo anodya pane zvakasara zvezvimwe mhuka dzakafa. Iwe unogona zvakare kuwana iyi mhando yeshiri muAmazon rainforest. Pakati pavo, pane imwe inomira pamusoro pevamwe vese: iyo mambo gora (Sarcoramphus papa). Haisi mhuka yakanakisa nekuda kwemavara ane mavara uye mapundu anokuvadza kumeso.
Nekudaro, iyo inofanirwa kuzivikanwa kuti, senge yayo Andean hama iyo CondorIyo ine imwe yakasarudzika mweya inoita kuti inyanye kukwezva. Zvichienderana nenzvimbo yeAmazon iyo yainogara, shiri iyi inogamuchira mazita akasiyana, akadai se jungle condor o mambo zamuro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Shiri muAmazon Rainforest
Iyo cumbia, yechinyakare mutinhimira weColombia
Ndeapi makambani makuru ekugadzira mishonga muIndia?